Ku cusub Swiidhan | Hallå konsument - Konsumentverket
Miyaad ku cusub tahay Swiidhan? Marka aad hesho lambarka shakhsiga ayaad macaamiil ahaan wax badan qaban kartaa. Tusaale ahaa, waxaad qaadan kartaa kontaraag telefoon, wax ayaad internedka kaga iibsan kartaa oo aad heshii saxeexi kartaa. Markaad macmiil tahay, ayaad leedahay xuquuq iyo masuuliyado iyadoo ay wanaagsan tahay inaad kuwaas ogaato. Boggan waxa lagu turjumay luqado badan oo kala duduwan.
Waxyaalaha laga fikiraayo
Waligaa ha saxeexin heshiis ama kontaraag aanad fahmin.
Waligaa qof kale ha u saxeexin heshiis – xataa qoyska iyo asxaabta toona.
Ilaasho lambarkaaga shakhsiga iyo macluumka bangiga si aad u ahaato qofka kaliya ee isticmaali kara.
Biilashaad ku bixi wakhti Haddii aad hal biil oo isku mid ah wakhti ku bixin weydo dhowr jeer ayaa deyntaada loo gudbin doonaa Kronofogden (Hay'adda Fulinta ee Iswiidhan). Deyntaas ayaa adiga kugu adkeyn doonta inaad qaadato dhalashada Swiidhishka.
Noqo mid aad uga taxaddira dalabada aadka u wanaagsan ee aan macquulka u muuqan - tusaale ahaan, moobayl ama tablet hal kroon oo kaliya ah.
Waligaa ha ogolaan dalab uu qof telefoonka iibiyaa ku siiyo ilaa adigoo si buuxda u hubba waxaad iisbaneyso mooyee.
Ha qaadan amaah degdeg ah (snabblån) ama amaahda SMS (SMS-lån) iyadoo aanad marka hore soo ogaaneyn qiimahooda. Taasi waa sida ugu qaalisan ee lacag lagu amaahdo.
Miyaad iibsatey wax aan saani u shaqeyneyn? Haddii ay sidaas tahay, waxaad xaq u leedahay inaad dukaanka dib ugu laabato oo aad cabasho ka sameyso (reklamera) alaabta oo markaana caawimo lagu siiyo.
Miyaad wax ka iibsatey internedka oo aad kadibna is badashey? Waxaad xaq u leedahay xuquuqda dib uga laabashada (ångerrätt) ilaa 14 maalmood. Waxaad celin kartaa alaabta iyadoo lacagta laguu soo celin doono.
Dadka ku cusub Swiidhan ayaa talooyin kale ka heli kara halkan:
Halkan ayaanu kuu joognaa si aanu kuugu caawino
Maadaama oo aad tahay macmiil cusub, waxa jira waxyaalo badan oo aad ka fikiri doontaa. Kamuun kasta, waxa jooga lataliyayaal miisaaniyada iyo deynta (miisaaniyada- iyo talobixinta deynta) kaa caawin doonta dhaalahaaga. Kamuuno badan, waxa sidoo kale jooga la taliyayaasha macaamiisha (konsumentvägledare) kuwaas oo ku caawin kara haddii aad qabto su'aalo ku sabsan wax gadashada iyo kontaraagyada. Halkan bogga Hallå konsument, waxaad ka akhriyi kartaa jawaabo su'aalo badan oo la iska weydiiyo lacagta, kontaraagyada iyo wax gadashada.
Halkan ayaad anaga nagala soo xidhiidh kartaa ama la taliyayaasha macmiisha ee kamuunkaaga
Boggagan ayaa lagu heli karaa luqado badan:
Swiidhish fudud, enkel svenska